I-Oracle Certification - Isikhokelo esigqibeleleyo-ITS Tech School
12 UCanzibe 2017
I-Oracle Certification - Isikhokelo esigqibeleleyo
I-Oracle inokusondela kwiintlanga ze-145 kwaye isebenza ngabalingisi abaninzi ngokubhekiselele kwezobuchwepheshe beenkcukacha zekhompyutha, izikhokelo ezakhelwe, izigaba zolawulo, i-web kunye neefowuni zokusebenza kunye nezinye iinkqubo ezihlanganisiweyo kunye nokufikelela kude. Ikhompyutha kunye ne-computer yokuqhuba i-Information Technology Corporation inikezela ngokubanzi iikhosi kunye neZatifikethi kwiimfuno zehlabathi jikelele kwaye zibanceda ukuba bathathe i-toehold kwaye benze inkqubela kwikhompyutha kunye ne-IT.
Izifundo ze-Oracle kunye neeSatifikethi zinikezelwa kwiibonda kunye namacandelo afana nedatha, ifu, izicelo, ukulawula imisebenzi, izikhokelo zokusebenza kunye nemibono phakathi kwabanye. Izatifikethi zihambelana nemibutho yenhlangano ehlala ekhompyutheni, ukugcinwa kwempahla, ukwakhiwa kwesakhelo kunye nokwakhiwa kwezikhokelo zefu, phakathi kwabanye.
IYunivesithi ye-Oracle yimiqathango phakathi kweyona nto ifunwa emva kwamacandelo abantu abazama ukuthabatha icandelo kwi-Oracle iyala i-IT fragment ye-IT. Kukho i-Oracle yezigidi ze-1.8 eziqinisekisileyo iingcali eziphuma apho ezifuna iimfuneko kunye neemfuno ezifunekayo zenani elikhulu lezoshishino, iinkampani kunye nabanye. I-93% yabathengi bafumanisa iziqinisekiso ze-Oracle zixabisekileyo kwaye zithembele ekuqhutyweni komviwa ukuba anike iziqinisekiso ze-Oracle njengokuba kuthethwa kuyo. Naliphina i-Oracle Certification izakufumana ungaphantsi kwe-7% yokwandisa kwimbuyekezo yakho, kwaye abanye banokukwenzela ukunyuka kwindawo. Uninzi lweemibutho kunye nemibutho ye-IT inxulumene ne-Oracle, kwaye ukuqinisekiswa kwe-Oracle kungayedwa umhlaba apho uhlala khona kula magama aphezulu kwishishini (ezininzi zinemibutho ye-Fortune 500).
IiAracle Certification Areas
Zama ulawulo lweziqinisekiso
I ziqinisekiso zoVume
Ukuguqulwa kweeNkcazo zeMatyala kumanqanaba abo. Ezi nqanaba zihanjiswe (kwisicelo sokwandisa):
I-Oracle inikezela kwakhona i-intanethi ye-intanethi yokulungiselela. Ukulungiselela iZatifikethi zichane neZicelo, iDatabase, uLawulo lweShishini, amaShishini, iJava, iiNkqubo zokuSebenza nabanye. Ukususela ngoko ukuba ufuna ukuqinisekiswa kwinto ethile okanye iteknoloji, abaqeqeshi be-Oracle abaqinisekisileyo banokukukhwelisa. Ngaphandle kwe-Oracle ngokwayo, ukulungiswa kwangafana nokuya kwi-Oracle eqinisekisiwe kwiwebhu kwaye inqatshelwe ukugxilwa koqeqesho.
Iilayibrari ye-intanethi ye-intanethi kunye neendawo ezininzi ezahlukeneyo zinokunika zonke izinto zokuhlaziywa okufuneka uzuze iimviwo. Ukongezwa okufumanekayo yiikhosi kunye neeklasini ze-intanethi ezikunceda ukuba uzilungiselele ngokwaneleyo ngeeseshoni ezinomxholo. Umzekelo wamaphepha okuvavanya kunye neengxoxo nazo zingasetyenziselwa ukudibanisa kunye neqela eliyingcali kunye nobuninzi beentlobo ezahlukeneyo zokulungiselela impahla. I-Oracle irekhode zonke iimpahla zokuphonononga ezifanelekileyo kunye neeklasi zokufundisa kwiphepha leemviwo ze-Certification kuphela, kwaye ukususela ngoko unako ukuhlala ufundiswa kwaye ulisebenzise izinto ezingenakusebenza.
Njengoko kushiwo ngaphambili, i-Oracle Certification ibonisa izinto zayo. Umbutho uye wabonisa inkqubo yoqeqesho ekugcinweni kwengqondo ekugqibeleni injongo yokuqulunqa abasebenzi abanezakhono abanolwazi lokulawula izisombululo zobuchwepheshe ezenzayo. Singazibonakalisa iziqinisekiso ze-Oracle kwiindawo ezibandakanya:
Inxalenye yeziqinisekiso ze-Oracle ayinakulawulwa, oku kuthetha ukuba akukho babaviwa phakathi kweemviwo zovavanyo. Ezi ndleko i-$ 125. Iziqinisekiso ze-Oracle Certificates ezithathiweyo zizongeze i-$ 250, kwaye kwimeko apho kufuneka uqinisekiswe ngabo, kuya kufuneka ukuba uthathe uvavanyo kwi-Oracle egxininisekisiweyo okanye kwi-Pearson VUE, indawo yesifundo se-Oracle.
Silandela ngokuphanda iiklasi ze-Oracle Certification.
Kukho iziganeko ezihlukeneyo ze-80 kunye nezinto phantsi kwesikolo seSatifikethi sokuThatyathwa kwe-Oracle. Ezi ziquka i-Agile, iSibel, i-Hyperion, i-Demantra, i-Primavera, i-business-suite, i-GRC kunye no-JD Edwards. Kukho izitifiketi ezizodwa ze-60 kuloluhlu kwaye izinto zichonga uphando, ukulungelelanisa, ukulungiselela / ukulungiselela amalungiselelo, izitolimenti kunye nezinye iindawo ezifanelekileyo kunye neziyimfuneko.
Iklasi ye-Oracle Cloud Certification ibandakanya iziqinisekiso ezibonakalisa kunye ne-Oracle kunye nefu ye-java. Amanqanaba eSatifikethi aManyeneyo kunye nabaSebenzi phakathi kwabanye. Ezi Zatifikethi zinceda ukuba umntu asebenzise indlela yokusebenzisa iLu kwaye enze izigqibo ezinjengezenzo, ukufuduswa, ukuphucula kunye nabanye. Iimpawu zichaze isakhelo sefu, isigaba, inkqubo kwaye ziyanceda kwiinjongo zoshishino ezifana nokuhlangana, i-HR kunye ne-ERP phakathi kwabanye.
Kwimeko apho kufuneka uqoke ulwazi kunye nekhono ekusebenziseni nasekusebenziseni i-Oracle yolwazi, ezi ziqinisekiso kufuneka zibe yisigqibo sakho. I-Oracle inikezela ngaphezu kwe-40 yolwazi oluqhubekayo kwaye luphucule ukhuseleko kwaye linciphise iindleko ze-IT ngelixa linikeza inani elikhulu leenzuzo ezahlukeneyo ezichasayo. Iiklasi eziqhelekileyo ngaphakathi apho iziqinisekiso zinikezelwa ziquka "iSQL yam" kunye ne "Database Development Application" phakathi kwabanye.
OCA: Iimviwo ze-OCA yizo ezifundisa ukuphathwa kweendlela zokusebenza ngokubhekiselele kwiinkcukacha zolwazi. Unokwazi ukubheka kwi-12C iSQL isitifiketi, i-12C SQL isiseko seSatifikethi, iSiqinisekiso se-11g SQL esiyintloko, kunye neSQL Master Certification.
OCP: Ezi Zatifikethi zenzelwe ukufaka amakhono amaninzi afanelekileyo athathwe kwiinkcukacha zolwazi kubaviwa. Ukufezekiswa kweZatifikethi kufuneka uqedele ukulungiselela nokuqhuba indawo yokuhlala kwaye uphinde udlule uvavanyo lwe-Oracle oluchanekileyo kunye ne-12C yedatha.
OCM: Inqanaba le-Aces Certification ine-level level Certification njengemigangatho yokufaneleka. Ukuqinisekiswa kubonakalisa kunye ne-database ye-12C. Kufuneka ujongene novavanyo lokuhlaziywa kwe-ace kwaye kufuneka ube namaziko amabini, phakathi kweendlela ezahlukeneyo ezigcina ingqalelo ekujoliswe kuyo ekuphumezeni iSatifikethi.
Xa udinga ukunyaniseka kwaye udlulisele ukubandakanyeka kwisisombululo sezolawulo, zezi ziqinisekiso zokukhetha. Ukulungiswa kokusebenza kwamanqanaba okufikelela kwintsebenzo kukunceda uyingcali ukuba iqalise kwaye ijongane nayo yonke imingcipheko kunye nedatha echongiweyo ngenkqubo. Ukulungiswa kwesi sigaba kufaka i-Oracle yokuqhubeka kokuhlolwa kwesicelo, umlawuli we-Oracle, kunye nomsebenzi oyi-Oracle oyiNtloko ye-Ops. Iziqinisekiso ezikhoyo kuloluhlu zi:
I-Oracle iqulunqa izatifikethi: Kuloluhlu olulodwa lufikeleleke kwii-25 zeZatifikethi ezizodwa zokuqwalasela ukukhusela, ukulawulwa kweenkonzo zoluntu, intsebenziswano, umsebenzi, ivenkile kunye nezinye iithengi kunye namashishini anomsebenzi. Ezi ziNqanaba leNgcaciso zeSatifikethi kunye nokuqinisekisa ukusetyenziswa kwamatyekhnoloji ye-Oracle kumashishini kunye nemibutho ethile.
I-Oracle foundation Certification: Esi sibonakaliso sikhumbula wena njengengcali ye-IT onokuyicwangcisa, ukucacisa kunye nokwenza iisombululo ze-Oracle kunye ne-IT. Ukulungelelanisa abalawuli bezakhono, iZatifikethi zenza ukuba ukwazi ukuqhuba yonke i-Oracle ventures ngelixa ukwazisa ngokulawula kweqela. Izatifikethi onokuzifezekisa zibandakanya ingcali ye-IT yoyilo lokusebenza kunye nenkosi yokusebenzisa umlawuli wokuphila.
I-Oracle java kunye neziqinisekiso ze-middleware: Intuthuko ye-Oracle kwi-domain iquka ukuhlanganiswa kwamafu kunye nesicelo, ukukhangela kwezoshishino, i-java, kunye nokuphuculwa kwe-middleware, ukuphathwa kwebalawuli kunye nabanye. Iziqinisekiso ezikunikezela ngeempawu ezichazwe kule ntlupheko ziyahlukana ngezigaba ezahlukeneyo, ezichaphazela onke amanqanaba eSatifikethi, kubandakanye iqabane, ubuchule kunye nenkosi phakathi kwabanye. Iziqinisekiso zokuqinisekisa ziquka injineli yesofthiwe ye-java, umklami weJava, isicwangciso socwangciso, intloko yesakhelo kunye nabanye.
Izikhokelo zee-Oracle zoHlahlo lweeSatifikethi zichaze iqela leSolaris kunye nezokhuseleko, kunye noLawulo lwe-Linux. Omnye unokukhetha iSatifikethi kwi-premium, level level, kunye neqela lokufunda. Izikhokelo zokusebenza ze-Oracle zisesisombululo esikhulu kwisigxina sezentengiselwano njengoko izakhelo zibiza ngezantsi kwaye zinikezela ngokuqinileyo nokukhuseleka. Apha uya kufumana malunga neentlawulo ezikude, ulawulo lweenkcukacha, amanxibelelwano kunye nesibhakabhaka ngumda ukusuka apho! Abaphathi bamagosa kunye nabalawuli baya kufumana ezi Zitifiketi ziyanceda.
Izatifikethi ezichongiweyo ngeLinux ziyi-OCP kunye ne-OCA yolawulo lwenkqubo. Iziqinisekiso kunye negunya le-Linux 6. Igunya leSatifikethi lenzelwe i-Oracle accomplices kuphela.
Phakathi kweziqinisekiso zeSolaris yi-OCP no-OCA umlawuli. Iziqinisekiso. Isatifikethi sezinga lokuQinisekisa ukuFakela nokuQiniswa kokuSebenziselwa koSetyenziswa.
Abaqeqeshi be-Oracle OU banokukunceda ukuba ulungele kwiiNkcazo zokuncedisa kwaye kukuncede ukhethe i-Oracle Certification virtualization. Iinkqubo zokwenza ubuchule ziyi-centacenter centric kwaye zinceda ekuphathweni kweempahla ngokubambisana. Ukutshintshisiswa kwamaseva kunceda ekunciphiseni iindleko zengqalasizinda kunye nokuphuculwa kokulawulwa kwedatha.
Isatifikethi sezinga lokwiprogram apha yiNgcali ye-Desktop Infrastructure execution expert. Ichonga izinto kunye ne-desktop ebonakalayo. I-VM I-XMUMX yokusetyenziswa kweeProfeti zisesitifiketi seMviwo.
Indlela Yokufumana I-Solaris Certification - 1z0821 & 1z0876